Coronavirus: ekwentị na ngwa nwere ezi ozi | Ndị nne Taa
Coronavirus: ekwentị na ngwa nwere ozi ziri ezi
Ana L. | | Atụmatụ, Ahụike
N'oge ndị a anyị na-ebi ndụ a ozi saturation banyere COVID19, ma ọ bụ coronavirus. Ọtụtụ puku ozi, nkwanye, hoaxes… ihe niile. N'ime ndị nne taa, anyị na-akwado akara enyemaka nke obodo ọ bụla, ngwa ndị akwadoro yana ọwa gọọmentị ma ọ bụrụ na ị dị ime.
Dị ka ndị ọkachamara niile si kwuo, ọtụtụ ozi na-akpata nhụjuanya dịka enweghị ya. Ka anyị chọta itule. Ka anyị gee ntị ma lelee akụkọ ahụ, mana ka anyị ghara ịhapụ ya ma gbalịa ịchọta usoro anyị na-eme.
1 Nọmba ekwentị ozi na Spain
2 Ngwa banyere coronavirus
3 Ozi Pediatric na Obstetric
Nọmba ekwentị ozi na Spain
Ebe ọ bụ na mkpu na-elekọta mmadụ maka coronavirus, enwere nyeere igwe na Spain na obodo obula. Chọọ nke dị na mpaghara kwurula gị. Nnukwu obodo na-etinye ọrụ a na ọrụ nke ụmụ amaala, na Catalonia nwere ngwa ule maka ndị ọrụ ya.
Andalusia: 900 400 061 ma ọ bụrụ na ị nwere kọntaktị na onye dị mma na 955 545 060 (Salud Responde nọmba ekwentị) ịjụ ajụjụ banyere coronavirus.
Agwaetiti Canary: 900 112 061.
Cantabria: 112 na 061.
Navarra: 112 na 948 290 290.
Obodo Valencian: 900 300 555.
Galizia: 061 na 902 400 116, maka ozi izugbe.
Agwaetiti Balearic: 061.
La Rioja: 941 298 333 na 112.
Murcia: 900 121 212 na 112.
Obodo Basque: 900 203 050.
La Peeji nke Social Ministry nke GọọmentịNa ngalaba Ahụike Ọha, ozi emelitere dị na ọnụọgụ nke ikpe yana mpaghara kachasị emetụta. Ihe ederede, vidiyo na audio iji budata. Ndụmọdụ etu esi azụ ahịa, jee nkịta ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ.
Ngwa banyere coronavirus
Ugbu a anyị nọ n'ụlọ anyị na-enweta ọtụtụ ozi gbasara ngwa dị iche iche ị nwere ike iwunye na mkpanaka gị yana nke iji jụọ ase. Nwekwara ike ịhụ maapụ ọnọdụ nke mba dị iche iche dịka Spain, Italy ma ọ bụ United States. I nwere ike ime nke a Maapụ Google, ya mere nke a bu uzo ozo imuta omumu ala.
Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) amalitela bot ọrụ maka WhatsApp nke ha na-eme ka ị mara maka data coronavirus kacha ọhụrụ. Ikwesiri itinye ekwentị +41798931892 na listi ịkpọtụrụ gị ma dee ozi ọ bụla. Enwere ndepụta nke ajụjụ a na-ajụkarị banyere COVID-19, akụkọ kachasị ọhụrụ nke WHO, na akụkọ ifo banyere coronavirus. You nwere ike ịchọta otu ozi a na ibe ahụ, mana ị gaghị achọ ya.
N'aka nke ọzọ, kemgbe March 14 gara aga Apple anaghị anabata ngwa metụtara coronavirus nke si n'aka ndị a ma ama dịka ụlọ ọrụ gọọmentị, ndị NGO na-elekwasị anya na ahụike, ụlọ ọrụ nwere ezigbo mkpa na ahụike na ahụike ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Amazon gosipụtara onwe ya n'otu ụzọ ahụ.
Ozi Pediatric na Obstetric
Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ enwere umuaka n'ulo egbula nzuzu n’acho ihe omuma banyere coronavirus. Dị ka anyị kwuburu, inwe ihe ọmụma gabigara ókè pụkwara ịkpata nchegbu. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ka mma ka ị gakwuru ndị otu na-akwadebe akwụkwọ ahụ.
Iji maa atụ Spanishtù Na-ahụ Maka Ọrịa Spanishmụaka na Spanish (AEP) na-emekọ ihe ọnụ na General Directorate nke Ahụike Ọha na Ngalaba nke Ahụike na Oriri na ịdepụta akwụkwọ dị iche iche na-achikota ihe akaebe dị na mpaghara Pediatrics dị iche iche. Nkwupụta na ndụmọdụ ndị a niile dị na weebụ. Ma cheta na ha bụ maka ndị ọkachamara.
Ma ime Ruo ugbu a, ọ bụghị na sayensị ka egosiri na ụmụ nwanyị dị ime na-arịakarị ọrịa. A naghị ebute nje a site na mmiri ara ara, yabụ nne nwere ike inye nwa ya mmiri ara ehi na enweghị nsogbu. Taa ka nne mụrụ coronavirus mụrụ nwa izizi, amatara na nwa ahụ enweghị ya, a na-edobekwa ha abụọ iwu.
Site n'ụzọ OCU adọọlarị aka ná ntị banyere mmanụ na essences ndị a na-ere na nke anaghị echebe megide contagion ma ọlị. Ihe kachasị mma iji gbochie bụ ịsacha aka gị na ncha na mmiri, ma ghara imetụ ihu, ọnụ, na anya gị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Nlekọta » Ahụike » Coronavirus: ekwentị na ngwa nwere ozi ziri ezi
Ahụ ikpo ọkụ n’ahụ ụmụaka, olee mgbe ọ ga-abụ ụjọ?
Ime dị ime mgbe ezigbo ihu igwe rutere